प्रदेश ५को राजधानी दाङ बनाउने चर्चासंगै बुटबलमा आन्दोलन सुरु « News24 : Premium News Channel
प्रदेश ५को राजधानी दाङ बनाउने चर्चासंगै बुटबलमा आन्दोलन सुरु
बुवटल । प्रदेश नं. ५ को राजधानी दाङलाई बनाउने चर्चा चलेसंगै बुटबलमा आन्दोलनको कार्यक्रम सुरु भएको छ । बुधबार नेपाली कांग्रेस निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ ले प्रदेशको राजधानी बुटवल हुनुपर्ने माग गरेको छ ।
बुटवलमा पत्रकार सम्मेलन गरी प्रदेश नम्बर ५ को राजधानी बुटवल हुनुको विकल्प नभएको वताएका हुन् ।कांग्रेस नेता युवराज गिरीले प्रदेशको राजधानी बुटवल बाहिर तोकिए आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिए ।
कांग्रेस रुपन्देही क्षेत्र नं. २ का क्षेत्रीय सभापति हरि लम्सालले आवश्यक भौतिक पूर्वाधार, सुरक्षा एवं औद्योगिक, पर्यटकीय एवं व्यापारिक हिसाबले बुटवल नै उपयुक्त रहेको भन्दै बुटवल नै प्रदेशको राजधानी हुनुपर्ने बताए ।
कांग्रेसले आन्दोलनको सांकेतिक स्वरूप बिहीबार बिहान ९ बजेदेखि १० बजे सम्म बुटवल, सैनामैना र मणिग्राममा एक घण्टा चक्काजाम गर्ने बताएको छ ।
यदि सरकारले बुटवल राजधानी नबनाए आन्दोलनको बेरिबाट भए पनि बुटवललाई प्रदेशको राजधानी बनाएरै छाड्ने बुटवल उपमहानगरपालिकाका नगर सभापति खेलराज पाण्डेले चेताबनी दिए ।
एमालेले पनि दबाब मूलक कार्यक्रमको घोषणा गरेको छ । स्थानीय संघसंस्थाहरुलाई समेत आह्वान गरी प्रदेशको केन्द्र बुटवल बनाउनका लागि बिहीबार बिहान ११ बजे पुष्पलाल पार्कमा दबाव याली निकाल्ने एमाले जिल्ला प्रचार विभाग प्रमुख तेजेन्द्र केसीले जानकारी दिए ।
एमाले निकट अनेरास्ववियु आन्दोलनको सुरु गरेका छ । अनेरास्ववियुले बुटवलमा आज साझ मसाल जुलुस निकाल्दै आन्दोलन सुरु भएको उद्घोष गरेको हो । अनेरास्ववियुले बुटवल बहुमुखी क्याम्पसबाट मसाल जुलुस निकालेको थियो ।
प्रदेश नम्बर ५ को राजधानी बुटवल घोषणा गर, निर्वाचनको मतपरिणाम सार्वजनिक गर लगायतका प्ले ब्यानरसहित विद्यार्थीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका हुन ।